Ndị Gọvanọ Ọwụwa Anyanwụ Enweela Nnukwu Ọgbakọ Pụrụ Iche
Ndị gọvanọ mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị nọrọ n'isi ngwụcha izu ụka gara aga wee nwee nzukọ dara ụda, ebe ha nọrọ wee kwekọrịtakwa banyere ọtụtụ ihe, ha na ndị nnọchi anya mpaghara ahụ n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu etiti, ndị otu Ọhaneze Ndị Igbo, nakwa ndị ọkaokwu ụlọ ọgbakọ omebe iwu dị iche iche e nwegasịrị na steeti dị na mpaghara ahụ.
Ya bụ nnukwu ọgbakọ bụ nke weere ọnọdụ n'obi gọọmenti steeti Enugu, ma bụrụkwa nke dọtara ọtụtụ ndị dị iche iche selitere isi na mpaghara ahụ.
E nwere ọtụtụ mpụtara dị iche iche na ihe ndị e kwekọrịtara site n'ọgbakọ ahụ, nke gụnyere:
Nkwekọrịta e mere ka e nwee ọgbakọ pụrụ iche banyere ọnọdụ akụnụba mpaghara ọwụwa anyanwụ, site na njikọ aka ọnụ nke ndị otu DFID, bụ nke ga-ewere ọnọdụ na steeti Enugu, malite n'abalị iri na otu wee ruo n'abalị iri na atọ nke ọnwa Nọvemba ahọ a.
Nkwekọrịta e nwere maka ọbịbịa nke ndị otu a kpọrọ "Brenthurst Foundation" nke mba Saụtụ Afrịka, na mpaghara ahụ malite n'abalị isii wee ruo n'abalị iri na otu nke ọnwa Nọvemba ahọ a, bụ nke ga-ehibe isi n'ọnọdụ akụnụba nke mpaghara ahụ.
A nọrọ na ya wee kpọkuo gọọmenti etiti ka o mee ngwa were ọsọ were ije leruo ajọ ụzọ ya dịgasị na mpaghara ahụ anya ma rụgharịsịa ha, ọ kachasị ugbu a ọkọchị ji nwayọ akpụdobe nso. Nke a bụ iji gbakwụnye na nzukọ ha na onyeisi ala Buhari mere n'oge gara aga, banyere ụkọ ihe e ji akwalite ezi ọnọdụ obibi ndụ ụmụ mmadụ, tinyere ajọ ọnọdụ ụzọ dị na mpaghara ahụ, ọ kachasị ụzọ awara awara ahụ si Enugu wee gaa Ọnisha, nke si Enugu wee gaa Pọọtụ-Hakọọtụ, nke si Aba gaa Ịkọt-Ekpene, nke si Ọkigwe gaa Owerri, nakwa nke si Naịịnt-Maịlụ wee gaa Makọọdị, tinyere ọtụtụ ndị ọzọ.
A rịọrọ ka e mee ngwa ngwa lebanye anya ma hazigharia ma ọ bụ dozie ọdụ ụgbọ elu mba ofesi Akanụ Ịbịam, ọ kachasị ebe ụgbọ elu si efeli na ebe a na-adọba ụgbọ elu.
Ha gosiputara obi ụtọ ha na afọ ojuju ha banyere nkwadobe na njikere ụmụafọ steeti Anambra dị ịpụta n'ìgwè wee tụọ akwụkwọ na nhọpụta a ga-eme na steeti ahụ, n'abalị iri na asatọ nke ọnwa Nọvemba.
Ndị bịara nnukwu ọgbakọ ahụ gụnyere: gọvanọ steeti Enugu, bụ gọvanọ Ifeanyị Ugwuanyị; nke Ebonyi bụ gọvanọ David Ụmahị; nke Abịa, bụ gọvanọ Okezie Ikpeazụ; nke Anambra, nke osote ya bụ Dọkịnta Nkem Okeke nọchitere anya ya; osote gọvanọ steeti Imo; osote onyeisi ụlọ ọgbakọ ukwu sineeti ala anyị, bụ sineetọ Ike Ekweremadụ; ụfọdụ ndị nnọchị anya ụlọ ọgbakọ omebe iwu etiti sitere mpaghara ahụ; onyeisi izugbe nke Ọhaneze Ndị Igbo, bụ maazị Jọn Nnnịa Nwodo, tinyere ụfọdụ ndị okwupụta okwu ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti dịgasị iche iche e nwere na mpaghara ahụ.